အလုပ်များတဲ့ ကိုကို မမတွေ ကျန်းမာလှပစေမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း ၅ သွယ် - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » အလုပ်များတဲ့ ကိုကို မမတွေ ကျန်းမာလှပစေမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း ၅ သွယ်
အလုပ်တွေအရမ်းများနေလို့ ပင်ပန်းနေတဲ့အခါ ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှ မလုပ်ချင်တော့တာ သဘာဝပဲ။ တနေကုန် လုံးလည်း ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ နာရီနဲ့ချီထိုင်နေရမယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ချိန် ဗိုက်ကလည်း ဆာနေတော့ အစားတွေ အများကြီးစားမိမယ်။ စားပြီးရင် အိပ်ယာထဲတန်းဝင်ပြီး အိပ်လိုက်မယ်။ မနက်မိုးလင်းရင် ရုံးပြန်သွားမယ်။ နေ့စဉ်ဘဝဟာ ဒီလိုပဲ လည်ပတ်နေတော့မှာလား။
ဒီလိုသာဆိုရင် ကိုကို မမတွေအနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာမယ်။ ခန္တာကိုယ်အနှံ့ အဆီပိုတွေများလာမယ်။ မကိတ်သင့်တဲ့နေရာတွေ ကိတ်လာမယ်။ ပေါင်တံတွေ လက်မောင်းတွေ တုတ်လာမယ်။ စိတ်ညစ်လာရမယ်။
လှချင်ပချင်တဲ့ မမတွေဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ် မှန်ထဲမကြည့်ချင်တော့ဘူး။ ကြည့်ရဆိုးနေမလား တွေးပူနေရပြီလေ။ ဖက်တီးကြီးဖြစ်နေပြီလား? ချစ်သူက ငြိုငြင်နေပြီလား? ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်တွေးမိတော့မယ်။ အလုပ်ကလည်းများ၊ ကိုယ်ကလည်း စိတ်ဖိစီးနဲ့ နေရတာ မပျော်မရွှင်ဖြစ်လာတော့ ကျန်းမာရေးပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ဘယ်လို ရှောင်လွှဲမလဲ? ကိုယ်က အလုပ်များနေတာနဲ့ပဲ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်အောင်၊ လှတပတနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် သင့်လျော်သလောက်ပဲရှိနေအောင် လုပ်လို့မရတော့ဘူးလား? ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်များနေပေမယ့်လည်း လှတပတနဲ့ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ခန္တာကိုယ်မျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ အောက်က လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ သင့်ကို ဒီလိုဖြစ်လာအောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။
စားသောက်မှုပုံစံကို ပြင်ဆင်ပါ – ကိုယ်လက် ကျန်းမာ၊ ကြံ့ခိုင်ဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံး ဝါးတီးကိစ္စကနေစတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တခြားအရာတွေလို အချိန်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ စားတဲ့သောက်တဲ့ ပုံစံကို ပြင်ဆင်လိုက်ရုံနဲ့တင် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီး စိတ်ရောလူပါ ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ အဆီတွေ ကယ်လိုရီတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ အစားအစာတွေ၊ အသင့်စား အစားအသောက်တွေကို လျှော့စားပြီး ပဲလို အစားအစာတွေ၊ လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ငါးတွေကို ပိုစားပေးတာမျိုး၊ ကော်ဖီသောက်တာလျှော့ချပြီး ရေကိုများများ ပြောင်းသောက်ပေးတာမျိုးတွေက ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်နှစ်သက်ပြီး ပုံမှန်လုပ်ချင်စိတ်ရှိမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ – ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ စိတ်မပါတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို ဘယ်သူမှ နေ့စဉ်ရက်ဆက် လုပ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးမှာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး နေ့စဉ်ပုံမှန် လုပ်ပေးတာက ရေရှည်အကျိုးပိုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ခင်း ပုံမှန် ပြေးတာမျိုး၊ ရုံးဆင်း ရုံးပေါ်ကို လမ်းလျှောက်တက်တာမျိုးတွေလို ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း သုံးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ – ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပေးတာကလည်း ကျန်းမာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်များတတ်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလေးထားဖို့၊ ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပေးတာက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်သာမက စိတ်ကျန်းမာရေးကိုလည်း အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ဖို့၊ အတွေးအခေါ် အိုင်ဒီယာကောင်းတွေထွက်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အားလပ်ချိန်တွေမှာ Social Media သုံးနေတာမျိုး၊ ရုပ်မြင်သံကြားထိုင်ကြည့်နေတာမျိုးထက် အကျိုးရှိစေမယ့် စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်တာမျိုး၊ ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်ရသူတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းလိုက်တာမျိုးက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ပိုငြိမ်းချမ်းစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ဇယားဆွဲပါ၊ သေချာ အစီအစဉ်ချပါ – အချိန်က တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်လုပြီး အလုပ်လုပ်နေရသူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စာရင်းတစ်ခုလုပ်ထားတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အလုပ်များတဲ့သူတွေဟာ အချိန်ပိုတွေ ဖန်တီးဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ရှိလာတဲ့အချိန်တွေထဲက ဘယ်အချိန်မှာ အားကစားလုပ်မယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ အနားယူမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ အလုပ်လုပ်မယ် စသဖြင့်သေချာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
နည်းနည်းနဲ့ ဖြည်းဖြည်းစတင်ပါ – အလုပ်တွေလည်းများနေတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း လုပ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အချိန်နည်းပါးနေလို့ဆိုပြီး စိတ်မညစ်နေပါနဲ့။ စိတ်ရှည်ပါ။ တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်မရွေ့လို့ ဆိုရိုးစကားရှိတယ်မဟုတ်လား။ တစ်နေ့ကို ၁၅ မိနစ်၊ နာရီဝက်လောက် အချိန်ပေးတာရုံနဲ့တင် ရေရှည်မှာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်စေပါတယ်။ ပုံမှန် လုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ နေ့စဉ် Squats တို့ Lunges တို့ကို ၂ မိနစ်စီလောက်၊ Kettle Bell တို့ Abs Work တို့ကို ၄ မိနစ်စီလောက်လုပ်ပေးရင်တောင်မှ သင်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါ နည်းလမ်းတွေဟာ အလုပ်များပြီး အချိန်ပိုနည်းပါးလှတဲ့ ကိုကို မမတွေအတွက် ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာနေထိုင်နိုင်စေဖို့ နည်းနာကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကို သုံးပြီး ခန္တာကိုယ် ကြံ့ခိုင်ကျန်းမာပြီး သင့်လျော်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မျိုး ရရှိအောင် ဖန်တီးယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇန်နဝါရီ 31, 2020 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 31, 2020